Ukukhutshwa kweBigCommerce 67 izihloko ezitsha ze-E-commerce | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 23, 2016 Douglas Karr
BigCommerce ubhengeze ama-67 amatsha amnandi kwaye aphendula ngokupheleleyo kwimixholo eyilelwe ukunceda abathengisi bavakalise ngokupheleleyo amandla eempawu zabo kunye nokukhulisa amashishini abo. Sebenzisa ubuchule bokuthengisa kwanamhlanje kunye nokucoceka, ujongano olunomdla, abathengisi baya kuba nakho ukukhetha imixholo ye-e-commerce eyenzelwe ubungakanani beekhathalogu ezahlukeneyo, iindidi zentengiso kunye nokwenyusa ukwenza amava okuthenga ngaphandle komthungo kubaxumi bazo kuso nasiphi na isixhobo.
Isitshixo sempumelelo kwintengiso yanamhlanje yokuthengisa okhuphisanayo kukuthengisa kungekuphela nje imveliso, kodwa amava onke kwivenkile. Ngemixholo yethu emitsha, kunye nesakhelo sophuhliso esitsha esibanika amandla, abarhwebi bethu baya kwenza umbono wokuqala omangalisayo kubathengi banamhlanje abaphumeleleyo kwi-Intanethi kwaye ekugqibeleni bathengise ngaphezulu kunokuba bebeya kwenza nakweliphi na iqonga le-ecommerce emhlabeni. UTim Schulz, iGosa eliyiNtloko leMveliso kwi BigCommerce.
Yakhelwe ngokuthengisa kunye neempawu zemveliso zangoku njengesiseko, imixholo emitsha ilungiselelwe iintlobo ngeentlobo zobukhulu bekhathalogu yemveliso, amashishini kunye nokwenyusa. Ngokukhetha enye yemixholo emitsha, abathengisi banokufikelela kwinani leempawu, kubandakanya:
Uyilo olwenzelwe abathengi beeselfowuni -Yakhelwe amashishini alungele ukuthengisa ngakumbi kuzo zonke izixhobo, imixholo emitsha ibandakanya inkqubela phambili kuyilo ukuqinisekisa ukuba indawo yokugcina igcinelwe abathengi nokuba yeyiphi na into abayisebenzisayo ukukhangela okanye ukuthenga.
Ukwenza ngokungenamthungo nangokulula - Abathengisi baya kuba nakho ukwenza ukubonakala kunye nokuziva kwindawo yabo yokugcina ngexesha lokwenyani, kubandakanya ifonti kunye nemibala yemibala, uphawu, uphawu lokuthengisa kunye nokuthengisa okuphezulu, ii-icon zemidiya yoluntu kunye nokunye.
Umsebenzi owenziweyo wokuKhangela okuSebenzayo -Ukhangelo olwakhiwe ngaphakathi lwangaphakathi luphucula amava abathengi ngokuvumela abathengi ukuba bacofe, bafumane kwaye bathenge iimveliso ngokulula, ngokwenyusa ukuguqulwa ukuya kuthi ga kwi-10%.
Ukuphuculwa kwephepha elinye lokuphuma -Ngokubonisa onke amasimi kwiphepha elinye lewebhu eliphendulayo, abathengi banamathuba amaninzi okugqiba ukuthenga; abathengisi babone ukuya kuthi ga kwi-12% yokunyuka kokuguqulwa ngamava amatsha okuphuma.
Imixholo emitsha yeBigCommerce iyafumaneka ukukhetha abathengi ukuqala namhlanje, ngokufumaneka kwabo bonke abathengi kamva kule nyanga. Imixholo emitsha inokuthengwa kwindawo yentengiso yemixholo, ngamaxabiso aqala kwi- $ 145 ukuya kwi- $ 235; Ukongeza, iindlela ezisixhenxe zemixholo yasimahla ziyafumaneka.
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye BigCommerce.
tags: BigCommerceimixholo enkulu yezorhweboImixholo ye-e-yorhweboImixholo ye-ecommercepixel umanyano
Esona sicwangciso siBalaseleyo se-imeyile sokuSebenza ngokuNgena